ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်မပြည့်ဝတဲ့အခါ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 30/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရေကို ပြည့်ဝလုံလောက်အောင် မသောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာဖြစ်လာမယ်ထင်လဲ….. တစ်နေ့တာမှာ ကျန်းမာနေစေဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာက အနည်းဆုံး ရေ ၈ ခွက်သောက်ဖို့ပါ။ ရေအစား အရည်တွေဖြစ်တဲ့ အချိုရည်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ဆိုဒါ နဲ့ ဘီယာလိုမျိုး အရည်တွေကတော့ ရေအစားထိုးသောက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ရေငတ်ပြေစေနိုင်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေဓာတ် လိုအပ်ချက်ကိုတော့ မဖြည့်ပေးနိုင်ပါဘူး။
အကြောင်းကတော့ ဒီသောက်စရာတွေမှာ သကြား၊ ဆား၊ ကဖင်း၊ အယ်လ်ကိုဟော စတာတွေ ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ ဒါတွေက ရေဓာတ်မပြည့်စေတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရေဓာတ်ကိုတောင် ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ရေငတ်မှ ရေဆာမာ ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုဖြစ်စဉ် စတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေဓာတ်မပြည့်ဝတာ၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာတွေက မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျန်းမာနေစေဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် သောက်သုံးတာပါ။
ရေဓာတ်မပြည့်ဝတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ…………..
တစ်နေ့တာကို ရေ ၈ ခွက် ပြည့်အောင်မသောက်မိတာက တစ်ရက် နှစ်ရက်မဟုတ်ဘဲ ရက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်လုံလောက်မှု နည်းလာပါတယ်။ ဒီလို ရေဓာတ်ပြည့်ဝလုံလောက်မှု မရှိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ရေတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ကျန်းမာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သီတင်းပတ်တစ်ခုလောက် ရေမသောက်ဘဲ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ် မလုံလောက်တဲ့အခါ ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ခက်ခဲလာပါမယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို မစွန့်ထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ဟန်ချက်ညီမှု ပျက်သွားပြီး ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်ကူးစက်ရဖို့ လွယ်ကူ သွားပါတယ်။ ရေဓာတ်နည်းတာက ခန္ဓာကိုယ် အင်အားကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်နည်းလာတဲ့အခါ သွေးတွေက ပျစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုပျစ်လာတာက သွေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး နှလုံးဆီ သွေးရောက်ရှိမှု နည်းစေပါတယ်။ ဒီလိုကနေ သွေးတိုးတာ၊ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောများတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်စေဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
ရေနည်းနည်းပဲသောက်တာက ကိုယ်တွင်းက ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် မဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါ အဆီဆဲလ်တွေထဲမျာ အညစ်အကြေးတွေစု လာစေပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ ရေကို ပြည့်ဝအောင်မသောက်မိဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာနေမယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ အဝလွန်လာမှာပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းက မနက်စာ မစားခင်၊ နေ့လယ်စာ မစားခင် နဲ့ ညစာ မစားခင်တိုင်းမှာ ရေတစ်ခွက်ကနေ ၂ ခွက်လောက်အထိသောက်ပေးပါ။ ဒီလို ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အဝလွန်တာကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရေဓာတ်မပြည့် မလိုအပ်ဘဲ အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရေဓာတ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တာကြောင့် ရေဓာတ် မပြည့်ဝတဲ့အခါ အရေပြားမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာစေမှာပါ။ အရေပြားရဲ့ ကော်လာဂျင်ထွက်ရှိမှု ကောင်းစေပြီး တင်းရင်းလှပ စေဖို့ဆိုရင် ရေများများသောက်ပေးပါ။
What Happens to Your Body When You Drink Enough Water? https://www.webmd.com/a-to-z-guides/ss/slideshow-drink-enough-water Accessed Date 12 May 2020
How Does Dehydration Affect the Body? https://share.baptisthealth.com/dehydration-effects-the-human-body/ Accessed Date 12 May 2020
7 Health Issues You Didn’t Know Came From Dehydration https://www.bustle.com/p/7-health-issues-you-didnt-know-came-from-dehydration-9764200 Accessed Date 12 May 2020
What you should know about dehydration https://www.medicalnewstoday.com/articles/153363 Accessed Date 12 May 2020